Gore rapfuura rave rimwe ratakashanda tisinganeti pavatengi… zvekuti takagara tichiregeredza kwedu kumashure yadhi. Martech Zone ibhuku rakakosha rine mashoma zviuru mablog mablog anopfuura makore gumi. Isu takatamira mukubata, takachinja madingindira kanoverengeka, nekugadzirisa edu plugins nguva dzese, uye takave neinoshamisa chinzvimbo dzimwe nguva uye kusarongeka chinzvimbo kune vamwe.
Kutaura chokwadi, ini handina kunyatsoteerera pakutsvaga nekuti taive nematanho akanaka uye vateereri vanofarira vakanyorerwa neemail, nharembozha, podcast uye kunyange vhidhiyo. Asi isu tanga tichishanda pane ino saiti tisinganeti mumwedzi mishoma yapfuura kugadzirira iri kuuya dhizaini dhizaini, isu hatina kukwanisa kubatsira kuona kuti shanduko dzatave kuita dzakakanganisa zvikuru chinzvimbo chesaiti pamatanho zviuru zviuru zvemisanganiswa yemazwi. - mazhinji anokwikwidza.
Isu hatina kugadzirisa zvakaringana saiti uye kuongorora masosi, saka ini handina kukwanisa kukuudza kuti ndeapi mabatanidzwa kana chinhu chimwe chete chakanyanya kukanganisa. Ini ndinogona chete kukuudza kuti mushure mekuita zvese izvi zvinhu, chinzvimbo chedu chakakwira. Ndine chokwadi chekuti mamwe acho haana kuita musiyano, asi handikwanise kuzvitaura nechivimbo chekuverenga. Saka - ini ndichagovana shanduko muhurongwa hwandinotenda hwakaita mutsauko wakanyanya.
Disavow Links - kuva nehuremu hwakaipa hakurevi nguva dzose kuti wakadomwa-indexed, zvinogona kunge zvichikubata kumashure. Takaita ongororo yekumashure tichishandisa Batanidza Detox uye disvowed ese ehukama pamasaiti ayo airatidzika kunge mashoma uye aine toni yezvinobuda zvinongedzo.
Yakaderedzwa script uye CSS zvikumbiro - iyi iri kure nekupfuura, asi isu tanga tine akati wandei plugins - kusanganisira yedu huru menyu - yaive nematoni ezvinyorwa uye CSS zvikumbiro. Tichine tani yandiri kutsvaga kudzikamisa, asi ikozvino tave nehafu yezvikumbiro paunorodha peji.
Yakabvisa Zvekare Zvemukati - isu taive netani yezvinyorwa pahunyanzvi izvo zvainge zvisisipo Isu takaderedza nhamba yedu yezvakatumirwa pane ino saiti nekupfuura chiuru chezviuru pamusoro pegore rapfuura. Zvimwe hazviwanzo zvirinani - kunyanya kana iwe uine zvakawanda zvemukati izvo zvisiri kuwana kutariswa. Zvinyorwa zvaive zvisina kugovana munharaunda, pasina backlinks kana zvakatumirwa nezve tekinoroji izvo zvisisipo zviri kubviswa.
Chinhu chinotonhorera nezve iri pamusoro basa - kunze kwekusavimbika uye kuchengetedza saiti - iro rakaomesesa basa kwaive kugadzirisa ruzivo rwemuverengi pane saiti. Tevere isu tiri kudzokera kumashure uye nekuona kuti yega yega positi ine yakanaka yakaratidza mufananidzo inosangana neiyo uye isu tiri kugovana zvekare zvirevo izvo zvichiri kukosha - kuyedza kukwezvana navo kwavari kuti vasimbise simba rezvinyorwa zvatinoisa simba mukati!
Kunyange ini ndine chivimbo chekuti zvese izvi zvakashanda, panogara paine mukana wekuti mamwe masayiti atange tichikwikwidza nawo achangopunzika nemagadziriso ealgorithm, futi!
Nov 3, 2014 pa9: 05AM
Urwu runyorwa rukuru rwekuti uwane imwe yekukurumidza bang kune yako buck - zvachose kuba izvi. Kune vanhu vari kutanga chete ini ndinowedzera: chera zvakadzika muGoogle Webmaster Zvishandiso zvako kana usati wave mumwedzi yakati wandei yapfuura.
Mbudzi 10, 2014 na8: 20 PM
Kutenda neiyo posvo Doug. Iwe unogona here kutaura zvakawanda nezve izvo-zvisina-zvinotevera zvinongedzo? Takaita tsika yekugadzira akawanda ekunze ma link haateedzere futi, kana kudzikisira zvakanyanya nhamba pasiti kuti tibatsire kutsigira zvaive chaizvo blog, asi zvichibva pane zvawataura pamusoro, tinofanira kuchinja maitiro edu here?
Nov 11, 2014 pa8: 46AM
Matt Kucheka yakapa kumwe kujekesa pane zvisina kufanira muvhidhiyo iyi zvakaita kuti ndichinje yangu. Ini ndaigara ndichitenda kuti aitevera maratidziro aive akafanana ne "maburi" mune yangu saiti kwandaidurura chiremera kudzokera kumasosi. Maonero angu pari zvino ndeekuti Google inoziva kana iyo saiti yekuenda iri yakakodzera uye yakakodzera chikwereti Kana iwe urikugadzira zvese nezvisina, ndinonyatsoziva kuti Google inoziva kana iwe uri kungoedza kutamba mutambo uyu. Zvekare zvakare, ndinofunga kuti kushambadzira kunofanirwa kugara kuine iwo pazano reGoogle. Zvese zvimwe, handisisina chivimbo futi. Ndinovimba inobatsira! Iwe unogona kugara uchiedza uye kuona! Bvisa ivo uye mirira mavhiki mashoma kuti uone zvinoitika!